Google Drive dia nohavaozina mba hanamorana ny fanovana avy amin'ny iOS mankany Android | Vaovao IPhone
Google Drive dia nohavaozina mba hanamorana ny fanovana avy amin'ny iOS mankany Android
Roa taona lasa izay, Apple dia nandefa fitaovana vaovao namela ireo mpampiasa Android hifindra ny atiny rehetra avy amin'ny finday finday Android ho any iPhone, afa-tsy ny atiny arovan'ny DRM, toy ny hira, sarimihetsika, boky ... Araka ny Apple ity vaovao ity Ny fitaovana dia namela ilay orinasa monina ao Cupertino hahazo mpampiasa betsaka avy amin'ny sehatra mpifaninana. Amin'izao fotoana izao dia manana anjaran-tsena manerantany saika 90% i Google, nefa na izany aza, toa tsy te ho very mpampiasa izy ary vao avy nanavao ny fangatahana Google Drive ho an'ny iOS, manampy safidy vaovao mamela ny famindrana ny atiny rehetra amin'ny iPhone amin'ny fitaovana Android, afa-tsy ny atiny arovan'ny DRM.
Raha te hiditra amin'ity asa ity dia tsy maintsy mankany amin'ny menio Settings ary kitiho ny Make backup. Amin'izay fotoana izay dia hiseho avokoa ny angona rehetra azontsika afindra mivantana amin'ny fitaovantsika Android, anisan'izany ny fifandraisana, ny hetsika amin'ny kalandrie ary ireo sary sy horonan-tsary izay notehirizinay tao. Mba hanatanterahana an'io dingana io dia mety maharitra ora maromaro, Mamporisika ny fampiharana ny hamelantsika ny fitaovana eo am-pandehanana ny fampiharana ary mandeha tsara izany raha mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi isika.
Mandra-pahatongan'ny fanombohana an'io endri-javatra vaovao io, ny safidy tokana ny fahafahany nanao ilay fifindra-monina dia tamin'ny alàlan'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo, ao anatin'ny dingan-dàlana somary sarotra izay mitaky ny fananana solosaina eo an-tànana, hahafahana mamindra ny sary sy ny horonan-tsary mankany amin'ilay fitaovana vaovao, zavatra iray noho io fiasa vaovao io dia tsy ilaina intsony.
Ireo mpampiasa ny Pixel sy Pixel XL vaovao dia manana rindranasa nantsoina hoe Quick Switch Adapter, izay namela ireo mpampiasa iPhone hamindra ny mombamomba azy ireo amin'ny terminal Google vaovao, saingy io fampiharana io dia nifanaraka tamin'ireo Pixel vaovao ihany. Raha mikasa ny hanao ny fanovana ianao, tsy maintsy ajanonao ny iMessage, hisorohana ny SMS alefan'izy ireo aminao tsy ho very eny an-dalana, olana iray izay efa niseho tao amin'ny Apple nandritra ny taona maro ary mbola tsy voavaha.
Google Drive - fitehirizanamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Google Drive dia nohavaozina mba hanamorana ny fanovana avy amin'ny iOS mankany Android
Korea Atsimo mety hamotopototra ireo olan'ny bateria iPhone 6s
Apple dia maniry ny hijanonan'ireo mpampiasa azy amin'ny charger sandoka